Vaovao - Inona avy ireo asan'ny mpianatra atody?
Tongasoa eto amin'ny tranonkalantsika!
Masinina fonosana atody mandeha ho azy
Masinina fanoratana sy fanangonana atody
Masinina fanoratana atody
Masinina fanasana atody
Masinina manendaka atody
Masinina mamaky atody
Inona avy ireo fiasan'ny grady atody?
Mampiasa ny tambajotran-tseraserany manokana ilay mpikatroka atody hanodinana ireo signal hifehezana azy. Satria ny tambajotra toy izany dia misoroka ny fampiasana tariby marobe ary manome rafitra fanaraha-maso sy diagnostika mitambatra, miantoka ny fiasan'ny milina azo antoka sy azo antoka. Ny masinina fanoratana atody dia misy asa toy ny fanadiovana, fanamainana, fanandramana ary fanamorana.
1. Fanadiovana atody: ampahany amin'ny fizotran'ny fanodinana atody ny fanadiovana. Ny dingan'ny fanadiovana dia hanala ny loto amin'ny atody.
2. Fanamainana atody: Rehefa manome rafitra fanadiovana dia manome dingan'ny fanamainana koa ny fitaovana. Rafitra iray tsy manam-paharoa no ampiasaina hanonganana ny hamandoana sisa tavela ao amin'ny atody atody, mba hanjavona ihany koa ny hamandoana farany, maina tanteraka ireo atody rehefa miditra amin'ilay mpanao ody atody. Tena tsara ny fahamainana ka azo atao pirinty mivantana.
3. Rafitra fanesorana vovoka sy volom-borona: Avy amin'ny atody ihany ny ankamaroan'ny vovoka ao amin'ny atrikasa fifantenana atody. Ny rafitra dia afaka mamoaka ny volom-borona sy ny vovoka mitsingevana amin'ny atody ary manaisotra azy ireo amin'ny alàlan'ny rafitra banga. Ny fanesorana ny vovoka dia tsy vitan'ny hoe mitazona ny fahadiovan'ny atody fotsiny, fa koa mitazona ny fahadiovan'ny fitaovana.
4. labozia atody: Ity rafitra ity dia afaka mamantatra mora foana ny atody tsy mendrika, ary manisa ary mitantana ny fitaovana.
5. Rafitra mamantatra ny triatra: ny rafi-pitantanana feo elektromagnetika dia afaka mamantatra triatra toy ny volo. Apetraka eo ambonin'ny lalan'ny atody ilay mpitsikilo.
6. Rafitra fanadiovana UV: ny taratra ultraviolet dia mety mamono bakteria ambonin'ny atody sy roolika. Na dia tsy mahavita manamboatra atody simba aza ny taratra ultraviolet, dia azo hamaivanina ny fihanaky ny tsimokaretina amin'ny fitaovana.
Ny milina fanaovana grady atody dia karazana fitaovana mandroso. Ny fitaovana dia afaka mizara ny atody ho any amin'ny sobika fanangonana isan-karazany arakaraka ny lanjan'ny atody. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fahombiazana azo itokisana, ny fandidiana mety, ny fahombiazana avo lenta ary ny atody dia tsy mora vaky mandritra ny fizarana mari-pahaizana.
Fotoana fandefasana: Feb-22-2021
NO.861 PANYU ROAD, FUWANYUAN, JINSHAN INDUSTRY, DISTICT, FUZHOU
Fax:+86 (0) 591 87640881
Masinina fanoratana atody, Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Mpanamboatra masinina mamaky atody,
Kitiho ny fidirana raha hikaroka na ny ESC hikatona